dhamma Videos - Page 267
ဝိနယသုသိက္ခိတတရားတော် (၁) - သီတဂူဆရာတော်
ဝိနယသုသိက္ခိတတရားတော် (၁) (၂၁-၀၄-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ ကဆုန်လဆန်း(၈)ရက် အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ သီတဂူဆရာတော် အရှင်ဥာဏိဿရ Aggamaha Pandita Thitagu Sayadaw Dr Nanisarra (Uploaded by MyanmarNet.Net ) (မြန်မာနက်)
34b/38 နိဗ္ဗာနသစ္ဆိကိရိယာစ မင်္ဂလာ (2/3) မင်္ဂလ သုတ္တန် တရားတော် သီတဂူဆရာတော်
34b/38 နိဗ္ဗာနသစ္ဆိကိရိယာစ မင်္ဂလာ (2/3) (၃၀-၀၆-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ ပထမ ဝါဆိုလပြည့့််ကျော်(၃)ရက် မင်္ဂလ သုတ္တန် တရားတော် သီတဂူဆရာတော် အရှင်ဥာဏိဿရ Aggamaha Pandita Thitagu Sayadaw
32b/38 ဗြဟ္မစရိယ မင်္ဂလာ တရားတော် သီတဂူဆရာတော်
32b/38 ဗြဟ္မစရိယ မင်္ဂလာ တရားတော် (2/2) (၂၈-၀၆-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ ပထမ ဝါဆိုလပြည့့််ကျော်(၁)ရက် မင်္ဂလ သုတ္တန် တရားတော် သီတဂူဆရာတော် အရှင်ဥာဏိဿရ Aggamaha Pandita Thitagu Sayadaw
32a/38 ဗြဟ္မစရိယ မင်္ဂလာ တရားတော် (1/2) သီတဂူဆရာတော်
32a/38 ဗြဟ္မစရိယ မင်္ဂလာ တရားတော် (1/2) (၂၈-၀၆-၁၉၈၀) ၁၃၄၂၊ ပထမ ဝါဆိုလပြည့့််ကျော်(၁)ရက် မင်္ဂလ သုတ္တန် တရားတော် သီတဂူဆရာတော် အရှင်ဥာဏိဿရ Aggamaha Pandita Thitagu Sayadaw
အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် အပိုင်း(၂) ဘာသာရပ် ပဋ္ဌာနပါဠိ အပိုင်း(၁)
ဓမ္မပညာသင်တန်း အဘိဓမ္မာ အပိုင်း(၃) (၂.၅.၂၀၁၄)
အဘိဓမ္မာ ပထမဆင့် စိတ်ပိုင်း ၁-၁
ဆရာတော် ဦးဥက္ကံသ ဖားအောက်တောရ (စင်္ကာပူ)တွင် သင်ကြားသော အဘိဓမ္မာသင်တန်းမှ သင်တန်းစာအုပ် ရယူလိုပါက အောက်ပါလင့်တွင် ဒေါင်းလုပ်ယူပါ။ http://sdrv.ms/16Cp7wr
ဓမ္မပညာသင်တန်း အဘိဓမ္မာ အပိုင်း(၁) (၁.၅.၂၀၁၄)
အဘိဓမ္မာ နှင့် ဝိပဿနာ
စင်္ကာပူနိုင်ငံ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း ခမ်းမပြုပြင်မှုများအတွက် ရေစက်ချအခမ်းအနား
စင်္ကာပူနိုင်ငံ အဘိဓမ္မာ ရက်တို အထူး သင်တန်း (ဒုတိယပိုင်း) သင်တန်းခမ်းမပြုပြင်မှုများအတွက်- အထူး-အလှူတော်- ရေစက်ချအခမ်းအနား ၂၂-၁၂ ၁၃-တနင်္ဂနွေနေ့ (You can download presentation slide from the following link. http://dhammadownload.com/File-Library/dhammadownloa
အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် အပိုင်း(၂) ဘာသာရပ် ပဋ္ဌာနပါဠိ အပိုင်း(၇)
အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် ရက်တိုသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁) ပထမတွဲ 2/10 Parts ဘဒ္ဒန္တ နန္ဒမာလာဘိဝံသ
အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် ရက်တိုသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁) ပထမတွဲ 2/10 parts ဘဒ္ဒန္တ နန္ဒမာလာဘိဝံသ, M.A; Ph.D အဂ္ဂမဟာဂန္တဝါစက ပဏ္ဍိတ၊အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ၊ Dr NandaMalaBhivamsa, Essence of Abhidhamma , Short Term Course no. 1 (27-07-2013 to 31-07-2013)(Myanmarnet.net Dhamma Videos)
အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် ရက်တိုသင်တန်း 10/10 Parts ဘဒ္ဒန္တ နန္ဒမာလာဘိဝံသ,
အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် ရက်တိုသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁) ပထမတွဲ 10/10 parts ဘဒ္ဒန္တ နန္ဒမာလာဘိဝံသ, M.A; Ph.D အဂ္ဂမဟာဂန္တဝါစက ပဏ္ဍိတ၊အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ၊ Dr NandaMalaBhivamsa, Essence of Abhidhamma , Short Term Course no. 1 (27-07-2013 to 31-07-2013)(Myanmarnet.net Dhamma Videos)
ဓမ္မပညာသင်တန်း အဘိဓမ္မာ အပိုင်း(၂၄) (၁၄.၅.၂၀၁၄)
အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် ရက်တိုသင်တန်း 8/10 Parts ဘဒ္ဒန္တ နန္ဒမာလာဘိဝံသ,
အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် ရက်တိုသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁) ပထမတွဲ 8/10 parts ဘဒ္ဒန္တ နန္ဒမာလာဘိဝံသ, M.A; Ph.D အဂ္ဂမဟာဂန္တဝါစက ပဏ္ဍိတ၊အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ၊ Dr NandaMalaBhivamsa, Essence of Abhidhamma , Short Term Course no. 1 (27-07-2013 to 31-07-2013)(Myanmarnet.net Dhamma Videos)
အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် အပိုင်း(၂) ဘာသာရပ် ပဋ္ဌာနပါဠိ အပိုင်း(၃)
အဘိဓမ္မာ ပထမဆင့် စိတ်ပိုင်း ၃-၂
ဓမ္မပညာသင်တန်း အဘိဓမ္မာ အပိုင်း(၂) (၁.၅.၂၀၁၄)
အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် ရက်တိုသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁) ပထမတွဲ 5/10 Parts ဘဒ္ဒန္တ နန္ဒမာလာဘိဝံသ
အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် ရက်တိုသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁) ပထမတွဲ 5/10 parts ဘဒ္ဒန္တ နန္ဒမာလာဘိဝံသ, M.A; Ph.D အဂ္ဂမဟာဂန္တဝါစက ပဏ္ဍိတ၊အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ၊ Dr NandaMalaBhivamsa, Essence of Abhidhamma , Short Term Course no. 1 (27-07-2013 to 31-07-2013)(Myanmarnet.net Dhamma Videos)
အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် ရက်တိုသင်တန်း 9/10 Parts ဘဒ္ဒန္တ နန္ဒမာလာဘိဝံသ,
အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် ရက်တိုသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁) ပထမတွဲ 9/10 parts ဘဒ္ဒန္တ နန္ဒမာလာဘိဝံသ, M.A; Ph.D အဂ္ဂမဟာဂန္တဝါစက ပဏ္ဍိတ၊အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ၊ Dr NandaMalaBhivamsa, Essence of Abhidhamma , Short Term Course no. 1 (27-07-2013 to 31-07-2013)(Myanmarnet.net Dhamma Videos)
အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် ရက်တိုသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁) ပထမတွဲ 4/10 Parts ဘဒ္ဒန္တ နန္ဒမာလာဘိဝံသ
အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် ရက်တိုသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁) ပထမတွဲ 4/10 parts ဘဒ္ဒန္တ နန္ဒမာလာဘိဝံသ, M.A; Ph.D အဂ္ဂမဟာဂန္တဝါစက ပဏ္ဍိတ၊အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ၊ Dr NandaMalaBhivamsa, Essence of Abhidhamma , Short Term Course no. 1 (27-07-2013 to 31-07-2013)(Myanmarnet.net Dhamma Videos)
အဘိဓမ္မာ ပထမဆင့် စိတ်ပိုင်း ၄-၂
အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် အပိုင်း(၂) ဘာသာရပ် အဖွင့် သြ၀ါဒတရား (၁.၈.၁၄)
အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် ရက်တိုသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁) ပထမတွဲ 3/10 Parts ဘဒ္ဒန္တ နန္ဒမာလာဘိဝံသ
အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် ရက်တိုသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁) ပထမတွဲ 3/10 parts ဘဒ္ဒန္တ နန္ဒမာလာဘိဝံသ, M.A; Ph.D အဂ္ဂမဟာဂန္တဝါစက ပဏ္ဍိတ၊အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ၊ Dr NandaMalaBhivamsa, Essence of Abhidhamma , Short Term Course no. 1 (27-07-2013 to 31-07-2013)(Myanmarnet.net Dhamma Videos)